Metro IT & Japanese
" မြန်မာပြည်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် အသုံးဝင်စေမည့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် "
ဂျပန်နိုင်ငံ၏သင်ရိုးညွန်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ယူရရှိနိုင်မယ့်
Metro IT & Japanese Language Centre！
Metro IT ＆ Japanese Language Centre သည် ဂျပန် IT ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Metro Computer Myanmar မှတည်ထောင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ နေ၍ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ပျိုးထောင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်စက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်။
Metro IT & Japanese Language Centre တွင် System Creator သင်ကြားရေးဌာန၊ PC Design Creator သင်ကြားရေးဌာန၊ Business IT Engineer သင်ကြားရေးဌာန၊ Japanese Language သင်ကြားရေးဌာန စသည့်ယနေ့ခေတ် လူမှုဘဝတွင် အသုံးဝင်မည့် ဘာသာရပ်များအား သင်ကြားပို့ချပေးရန် စီမံထားပါသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၌ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အသိပညာ၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာသင်ယူရင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်မားသော ဂျပန်ဘာသာစကား စွမ်းရည်များကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
သင်၏ ဂျပန်ဘာသာစကားကို Metro IT & Japanese Langauge Centre တွင် Basic Course မှ စပြီး စနစ်တကျ တိုးတက်အောင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဂျပန်စာနှင့် လုံးဝရင်းနှီးမှုမရှိသော သင်တန်းသားများကို ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားတစ်ဦးစီ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြည့်စုံစေရန် အခြေခံမှစပြီး Advanced Level အထိတိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Room No (A,B,C,D), 3rd Floor, Kyaw Business Tower Condo, Pansodan Street ( Middle Block ), Kyauktada Township, Yangon. GoogleMap
No (178/180), 36 Street ( Middle Block ), Kyauktada Township, Yangon. GoogleMap
Room No (7), Mandalay ICT Park, 3rd Floor, Yadanarbon Super Center, Corner of 34 x 78 Street, Mandalay. GoogleMap
ရန်ကုန်ကျောင်းဆွေးနွေးပွဲ နှင့် အစမ်းသင်တန်းများ၏ အချိန်စာရင်း
Time : 1:30 ~ 4:30 Date : 8,9,22,23,29,30
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်သူများ ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IT နည်းပညာများကို သင်ယူရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးမည့် ကျောင်းဆွေးနွေးပွဲများ
Time : 10:00 ~ 12:00 Date : 22,29
ကျောင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်တက်ရောက်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်！METRO ကျောင်း၏ သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များ နှင့် ITနည်းပညာများ ကိုလေ့လာ သင်ယူနိုင်မည့် အခမဲ့ နမှုနာအစမ်းသင်တန်းများကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
D78910 11 12
D T 14 15 16 17
Time : 1:30 ~ 4:30 Date : 5,6,12,13
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်သူများ ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IT နည်ပညာများကို သင်ယူရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးမည့် ကျောင်းဆွေးနွေးပွဲများ
Time : 10:00 ~ 12:00 Date : 5,12,13
Event : Fresher Welcome & Graduation Ceremony
Time : 9:00 ~ 12:00 Date : 17
10th Batch ၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲကို September 17 နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးကျောင်းဆွေးနွေးပွဲ နှင့် အစမ်းသင်တန်းများ၏ အချိန်စာရင်း
Time : 1:00 ~ 3:00 Date : 8,15,22,29
Time : 10:00 ~ 12:00 Date : 8,15,22,29
D T 21 22
E 23 24 25 26
Time : 1:30 ~ 4:30 Date : 5,12,19,20
Time : 10:00 ~ 12:00 Date : 5,12,19,20
Time : 9:00 ~ 12:00 Date : 22
6th Batch ၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲကို September 22 နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Metro IT & Japanese Language Centre မှာသင်ယူနိုင်သောသင်တန်းများက
ITပညာရှင်အဖြစ် လက်တွေ့တက်ကျွမ်းရမည့် ဘာသာရပ်များသာမက အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် ဗဟုသုတများကိုပါ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Metro ကျောင်းမှာ Web Engineer Courseကို လေ့လာသင်ယူပြီးWeb Developer ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ချင်လိုသူများအတွက်သင်ရိုးညွန်တမ်းများစနစ်တကျစီစဉ်ထားရှိပါထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ Business လုပ်ငန်းများကိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် Business IT Engineer များကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။
တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများကို လေ့လာဖန်တီးပြီး မိမိ၏အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပညာသင်သွားရောက်ရန်အတွက် အခြေခံအကျဆုံးဂျပန်စာအရည်အချင်း N5 အပြင် ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု၊လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နေထိုင်ပြောဆိုမှုကိုသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စာပေ ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ၊ ရုပ်ရှင်ဂီတ ၊ လူနေမှုဘဝ စသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကို သူငယ်ချင်းများ နှင့် အတူတကွ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
Metro IT & Japanese Language Centre (Mandalay) သင်ကြားရေး ပုံမှန် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
ဇန်နဝါရီ ၁၇ရက်နေ့တွင် Mandalay Yadanar Mall ၊ Sky Walk တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွင် Metro (Mandalay) သင်တန်းကျောင်းအတွက် ထပ်တူဝမ်းနည်း စိတ်ပူပန်ပေးခဲ့ကြသော Metro IT & Japanese Language Centre မှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူများ၊ Metro Group ၏ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများအားလုံးအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် သင်ကြားရေးများ ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ရသည့်အတွက်လည်း Metro (Mandalay) အနေဖြင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများအား အထူးပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး အဆင်မပြေမှုများအတွက်လည်း တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ Metro Group အနေဖြင့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး လစ်ဟင်းမှု မရှိစေရန်နှင့် သင်ကြားရေးများအမြန်ဆုံး ပုံမှန် ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် အထူးအလေးထား၍ ကြိုးစားစီမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၃ရက် (3.2.2020)တနင်္လာနေ့တွင် သင်ကြားရေးများ ပုံမှန် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
***** Metro IT & Japanese Language Centre (Mandalay - ယာယီသင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ) ****
လိပ်စာ : ၆၅လမ်း ၊ ပိတောက်လမ်း နှင့် သဇင်လမ်းကြား ၊ ချမ်းမြေ့သာစည် မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
သင်ကြားရေးပြန်လည်စတင်မည့်ရက် ။ ။ ၃. ၂.၂၀၂၀ (တနင်္လာ)
※ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ပုံမှန်ကျောင်းချိန်အတိုင်း မပျက်မကွက်တက်ရောက်ပါရန်